त्रिविका प्राध्यापक सरकारी तलब खाने, निजीमा पढाउने ! - त्रिविका प्राध्यापक सरकारी तलब खाने, निजीमा पढाउने !
त्रिविका प्राध्यापक सरकारी तलब खाने, निजीमा पढाउने !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १९ कार्तिक, 08:57:48 AM
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि त्रिविका प्राध्यापक सरकारी तलब खाने, निजीमा पढाउनेत्रिविका प्राध्यापक सरकारी तलब खाने, निजीमा पढाउने कर्मचारीसम्म लापरबाही र अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याएको हो ।
सातामा १२ देखि १५ कक्षा पढाउनुपर्ने प्राध्यापकले ३र४ वटा कक्षा मात्रै लिइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सातामा स्नातक तहलाई २४ र स्नातकोत्तरलाई २१ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रावधान हटाएर क्रमश १५ र १२ मा झारिएको थियो । सेमेस्टरमा १२ र ९ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तीमध्ये १ हजार ४ सय १० जनाले अन्य निकायमा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । ‘त्रिविका शिक्षकले तोकिएअनुसार क्याम्पसमा नपढाउने र हाजिर गरेर निजी कलेजहरूमा पढाउन गएको देखियो,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भने, ‘अनुमति नलिई पढाउने शिक्षक पनि थुप्रै भेटिए, यसले गर्दा त्रिविका विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको छ ।’
२०७५, १९ कार्तिक, 08:57:48 AM
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा एक सातादेखि तनाव !
प्राध्यापक संघको अधिवेशन पुस ११ देखि हुने, आवश्यक तयारी पूरा
तलब नपाएपछि शिक्षक आन्दोलनमा, मारमा विद्यार्थी
सरकारविरुद्ध नै उत्रिए सत्तारुढ विद्यार्थी संगठन, सम्बन्धन दिदा आर्थिक चलखेल